mpianatra amin'ny fitantanana morontsiraka Stickers
Handresy 10 Pro
Mandresy 10 Home
Mandresy 7 Pro
8.1 mandresy Pro
Hangataka A Quote
Microsoft Win 10 Pro 64bit OEM Version amin'ny teny frantsay
● Frantsay Version fametrahana sy ny fampahavitrihana ny aterineto, manohana ofisialy fanavaozana amin'ny aterineto.
● Real OEM fanontana antoka, mifanaraka amin'ny rafitra 64bits, asa feno tafiditra
● French manana Security fonony, Made in USA, Vita avy any Irlandy, Made in Singapore, sns
Payment: T / T, Wu
Edition: French OEM
Lead fotoana: 24 Hours
1.Windows 10 dia manome anao ny tsara indrindra traikefa Hanombohana fifadian-kanina sy hanaovan-javatra
2.Windows Miarahaba dia ny tenimiafina-maimaim-poana-in famantarana izay manome anareo ny mifady hanina, dia azo antoka indrindra fomba hamaha ny Windows fitaovana
3.Windows 10 Manafaka feno fiarovana - anisan'izany ny Antivirus, Firewall, Internet fiarovana, sy ny maro hafa
Bitlocker encryption antontan-kevitra sy ny fiarovana fanampiana foana ny vaovao azo antoka
4.Hyper-V miasa mamela anao mamorona milina virtoaly, raha mbola lavitra biraonao dia ahafahanao miditra ao amin'ny solosaina hafa
Title: Windows 10 Pro USB Full Version 64Bit anglisy Iraisam-pirenena
Key Teny: varavarankely 10 rafi-miasa; handresy 10 Ohb Full Version
Windows 10 Pro Operating System: Remote log-in, nomerika manokana mpanampy, ary ny fahafahana mihazakazaka Desktops virtoaly maro dia hanampy anao mba hampitombo ny vokatra. Manaova sary na soraty ao amin'ny tranonkala pejy, ary hizara azy ireo ho namboarina-tsoratra. Rehefa tonga ny fotoana haka aina, dia afaka stream Xbox iray afa-po ny Windows 10 PC, solosaina, na ny takelaka.
Handray an-tsoratra ao amin'ny vaovao Edge Microsoft Internet navigateur
Manaova, hanasongadinana, na manoratra mivantana amin'ny alalan'ny tranonkala pejy touchscreen na totozy, dia mizara ny tsoratra amin'ny hafa.
Ampanjifaina ny Start voalaza
Misafidiana ny haneho ny be mpampiasa indrindra, na vao haingana koa fampiharana, lahatahiry manokana, na ny toe-javatra rafitra.
Mihazakazaka maro fandidiana rafitra iray PC
Hamorona milina virtoaly amin'ny Hyper-V mba mihazakazaka mihoatra ny iray rafitra fandidiana tamin'izany andro izany. (Hyper-V 64-bit mitaky rafitra amin'ny fahaiza-manao sy ny SLAT fanampiny 2GB RAM.)
Miditra lavitra amin'ny Remote Desktop
Midira an Windows 10 Pro ao an-trano, tao amin'ny birao, na mandritra ny diany. (Internet fifandraisana ilaina, ISP saram manokana voalaza.)
Mahazo ny fidirana ny fitaovanao amin'ny alalan'ny fampiasana ny tondro, tavanao, na Iris
Safidio ny Windows 10 saim-petsy Hello Windows dia hahafantatra ny fanatrehanao, tsy misy mamoha ny filàna ny tenimiafina. (Mitaky tondro mpamaky, na IR na biometric sensor.)
Efijery zatra mba hifanaraka ny fitaovana
Onscreen fironana miova endrika mba hahafahana mora Fikarohana, ary ho samy hafa Apps maridrefy-salantsalany fampisehoana.
Mahazoa ireo tambajotra
Windows 10 Pro mifandray amin'ny raharaham-barotra, na am-pianarana mba hahazoana sehatra tambajotra antontan-taratasy, lohamilina, pirinty, sy ny maro hafa.
Play Xbox lalao iray ao amin'ny Windows 10
Stream ny Xbox lalao iray ho an'ny Windows 10 PC, solosaina, na ny takelaka. Lalao milalao optimisé ho an'ny Windows 10, na ny firaketana an-tsoratra ary mizara lalao fotoana amin'ny naorina-in Game DVR. (Broadband Internet ilaina.)
Mora multitask iray efijery
Hanaikitra hatramin'ny fampiharana efatra ho amin'ny varavarana lamba, na mamorona Desktops virtoaly mba hahazoana toerana bebe kokoa ny miasa miaraka ireo zavatra ilainao.
Raiso fanampiana avy amin'ny niomerika manokana mpanampy
Cortana manampy manerana ny Windows 10 fitaovana, mametraka fampahatsiahivana, manampy ny manoratra mailaka, na fampiantranoana Internet amin'ny namana sy ny olona ao amin'ny fianakaviana. (Cortana traikefa Mety tsy hitovy amin'ny faritra sy ny fitaovana.)
Mampitombo angona fiarovana
Windows 10 Pro tolotra encryption amin'ny BitLocker mpahay teknolojia, mandeha ho azy miaraka amin'ny Windows Update vaovao farany, mba hanampy hiarovana angona manokana. (BitLocker dia mitaky itokisana Sehatra Module 1.2 na 2.0, na flash USB.)
Conveniently miditra fampiharana
Windows 10 Pro mamela anao mamorona anao manokana fampiharana fizarana ao amin'ny Windows Store mba miditra fampiharana haingana. (Isan'ny fampiharana izay azo nibetroka dia hiankina amin 'ny kely indrindra ho an'ny fanapahan-kevitra ny fampiharana.)
Previous: Microsoft Win 10 Pro 64bit OEM Version amin'ny teny Anglisy FQC08929
Next: Microsoft Win 10 Pro 64bit OEM Version tamin'ny teny frantsay tamin'ny serial Key aterineto Activation
Alohan'ny télécharger Windows 10 Professional, ny solosaina dia tsy maintsy hanatanteraka ny fepetra takiana manaraka ireto:
Processeur: 1 gigahertz (GHz) na haingana.
RAM: 1 gigabyte (GB) (32-bit), na 2 GB (64-bit)
Free kapila mafy toerana: 16 GB.
Graphics karatra: Microsoft DirectX 9 sary fitaovana amin'ny WDDM mpamily.
Hijery jereo >>
Sealed Retail Box Windows 10 Professional USB &...